Guddiga Maaliyadd Miisaaniyadda iyo qorsheynta ee Golaha Shaca... | Universal Somali TV
Guddiga Maaliyadd Miisaaniyadda iyo qorsheynta ee Golaha Shacabka iyo xubno ka socday Midowga Yurub oo Muqdisho ku kulmay
Kulanka waxaa goobjoog ka ahaa guddoomiye ku xigeenka labaad ee Golaha Shacabka mudane Mahad Cabdalla Cawad.
Guddiga maaliyadda iyo xubnihii ka socday Midowga Yurub ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka wada shaqeyn ee labada dhinac, iyo is xogwareysi.
Sidoo kale waxa ay ka wada hadleen sidii labada dhinac ay isaga kaashan lahaayeen dhismaha, hagaajinta, hormarinta, maaliyadda iyo miisaaniyadda.
Guddiga maaliyadda, miisaaniyadda iyo qorsheynta ee Golaha Shacabka ayaa soo bandhigay baahiyaha ay qabaan, meelaha ay taageerada ugu baahan yihiin iyo qorshaha guddiga uu ku shaqeynayo.
Guddoomiye ku xigeenka labaad ee Golaha Shacabka mudane Mahad Cabdalla Cawad ayaa Midowga Yurub kaga mahad celiyay taageerada uu la garab taagan yahay golaha shacabka.
“Runtii Midowga Yurub waxa uu golaha shacabka iyo guddiyadiisa ka taageeraa dhinacyo badan, waxaan ku bogaadinaya iney sii laba jibaaraan dadaalka iyo waqtiga ay nagu bixinayaan”. ayuu yiri guddoomiye Mahad.
Guddoomiyaha guddiga maaliyadda, miisaaniyadda iyo qorsheynta ee Golaha Shacabka Xildhibaan Maxamuud Siraaji oo kulanka ka dib la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in qodobo muhiim ah ay ka wada hadleen labada dhinac.
“ Maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay 7 bisha Febraayo waxaa kulan muhiim ah la qaadanay xubno ka socday Midowga Yurub oo aan ka wada hadalnay arrimo badan, waxa ay noo balan qaadeen in ay tababaro siin doonaan xubnaha guddiga iyo hormarinta arrimaha maaliyadda”. ayuu yiri Xildhibaan Maxamuud Siraaji.
Midowga Yurub ayaa Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ka taageera dhinacyo badan sida tayo dhisida guddiyada Golaha, dajinta sharciyada iyo arrimo kale oo golaha muhiim u ah.
Kan-xigaRaiisal Wasaare Khayre oo balan qaada...
Kan-horeDuqa Muqdisho oo la kulmay Saraakiil ...
50,400,681 unique visits